Jiolahy mpamerin-keloka, efa impolo nigadra: maty voatifitry ny polisin’ny Fip i Rivo sy i Bruno | NewsMada
Jiolahy mpamerin-keloka, efa impolo nigadra: maty voatifitry ny polisin’ny Fip i Rivo sy i Bruno
Ao anatina fikambanan-jiolahy matanjaka, mpanao asa fampihorohoroana sy fanafihana mitam-basy ao Fianarantsoa, i Rivo sy i Bruno, araka ny fanamarihana nataon’ny polisin’ny Fip. Jiolahy mpamerin-keloka satria efa impolo, farafahakeliny, no nigadra tany am-ponja fa tafavoaka hatrany. Maty voatifitry ny polisin’ny Fip, omaly maraina, izy roa lahy ireto.
Nirefodrefotra ny poa-basy tao Fianarantsoa, omaly maraina. Maty rotiky ny balan’ny polisin’ny Fip ao Fianarantsoa i Rivo sy i Bruno, jiolahy raindahiny amin’ny fanafihana mitam-piadiana. Araka ny fanazavan’ny kaomandin’ny Fip ao Fianarantsoa, ry zalahy ireto avokoa ny tompon’antoka tamin’ny fanafihana tao Fianarantsoa ka anisan’izany ny fanafihana tao Ambatovory, ny herinandro lasa teo. Ray aman-drenina polisin’ny Fip ihany ny notafihin’izy ireo tamin’izany. Teo koa ny fanafihana tokantrano iray ao Antsororokavo sy nanafika tao amin’ny masera mpikarakara ireo olona tratran’ny areti-mifindra (boka) ao Ilena Fianarantsoa. Nohamafisin’ny polisy hatrany fa jiolahy efa nokarohina hatry ny ela ry zalahy ireto ary efa eo am-pelatanan’ny polisy ny mombamomba azy ireo. Ao anatina fikambanan-jiolahy mitam-piadiana mahery vaika izy ireo ary isan’ny nampihorohoro tao Fianarantsoa.
Nahazo loharanom-baovao ny polisin’ny Fip andro vitsivitsy lasa izay fa mihaodihaody matetika ao an-tranony eny Ambatovory Atsimo i Rivo sy i Bruno. Nametraka ny paikady rehetra sy nanao ny vela-pandrika hahahafana hisambotra azy ireo ny polisy.
Tonga tao an-tranon’izy ireo hisambotra azy ny polisy, omaly maraina, saingy nirifatra nitsoaka avy hatrany izy ireo ka raikitra ny fifanenjehana.
Manana basy mahery vaika…
Maty tsy tra-drano rotiky ny balan’ny polisy ireto jiolahy mpamerin-keloka ireto. Manana fitaovam-piadiana mahery vaika ihany koa i Rivo, saingy tsy hita tao an-tranony izany nandritra ny fisavana nataon’ny polisy. Nahitana “puce”-na telefaonina finday tany amin’izy ireo nandritra ny fisavan’ny polisy. Fantatra izao fa mbola misy jiolahy dimy hafa (ao anatina fikambanan-jiolahy iray tarika amin’i Rivo sy i Bruno) mbola karohin’ny polisy. Efa eo am-pelatanan’ny polisy koa ny momba ireto jiolahy ireto ka anaovan’izy ireo antso avo amin’ny fiaraha-miasa amin’ny mponina izay mety mahafantatra azy ireo. Mendri-piderana, araka izany, ny ezaka vitan’ny polisy tamin’ny nahalavo ireto jiolahy raindahiny amin’ny fanafihana mitam-pidiana ireto. Faritra isan’ny mafampana amin’ny asan-jiolahy mitam-piadiana rahateo ny any Fianarantsoa sy ny manodidina. Mitohy ny fikarohan’ny polisy ny naman’i Rivo sy i Bruno.